Iyo iMac nyowani inounza Apple zvitambi kuti zvienderane neruvara rweMac | Ndinobva mac
Iyo iMac nyowani inounza Apple zvitambi kuti zvienderane neruvara rwechigadzirwa
Justine atogamuchira iyo nyowani 24-inch iMacs. Uye ndinotaura muuzhinji nekuti ese mavara aripo asvika. Kushambadzira, Apple haichengetedze mari.
Uye chimwe chezvinhu chakanyanya kufadza iJustine, ndeyekuti chinamirwa chakakurumbira cheiyo logo yeApple iyo inosanganisirwa mubhokisi, inouya ichienderana neruvara rwechigadzirwa. Uye zvingave sei neimwe nzira, akadanana nepink.
Nhasi, Chishanu, iyo yekutanga 24-inch iMacs ichatanga kuendeswa kune vashandisi vakatoisa odha yavo mazuva apfuura. Asi senguva dzose, vamwe vane mukurumbira "vakaiswa mukati" YouTubers vakatogamuchira iyo iMac nyowani zvakananga kubva kuApple, uye yekutanga "unboxing", Chii takapindura Nezuro.
Uye imwe yehunhu hwakakwezva kutarisisa kweMac nyowani, ndiwo mavara ayo. Apple's new desktop komputa inouya izere nemuvara, ine mimvuri minomwe akasiyana casing kusarudza kubva.
Uye zvese pamwe ne ruvara kuratidza kesi. Tambo yemagetsi, keyboard, mbeva, Wallpaper, uye kunyangwe Apple logo chinamirwa icho chiri mubhokisi.
Seizvo iJustine inotiratidza, mubhokisi reMac nyowani mune zvitambi zviviri neapuro yakarumwa. Vanopinda mithunzi miviri yakasiyana, iyo inowirirana nematoni maviri (zvinonzwika uye akapfava) eMac pachayo.
Ruvara zvakanyanya uploaded ndizvo zveiyo mativi uye kumashure kubva pachiratidziri. Zvakawanda hembe, inoratidzwa mu frontal yeMac, pamwe nechena bezel. Izvi zvakafungidzirwa kuti zvisatsause zvirimo pachiratidziri.
ari accessories inowirirana nemavara senge nyowani yeMicrosoft Trackpad neMicrosoft Keyboard parizvino inongowanikwa nekutenga iMac nyowani. Kunyangwe Apple isina kuratidza izvi, tinovimba kuti izvi zvishongedzo zvichazotengeswa zvakasiyana zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyo iMac nyowani inounza Apple zvitambi kuti zvienderane neruvara rwechigadzirwa
Apple zvitoro zvinochengetera itsva 24 "iMac neChishanu
14 "uye 16" MacBook Pros ine Apple Silicon uye M2 Kutangisa Iyi Zhizha